Star Wars: The Force ongenza Review - Izindaba Rule
Star Wars: The Force ongenza Review
Lesi sihloko osesikhundleni “Star Wars: The Force ongenza Ukubuyekeza - a homecoming umbukwane” lalotshwa uPetru Bradshaw, ngoba theguardian.com ngoLwesithathu 16th December 2015 08.02 UTC
Related: Star Wars: The Force ongenza - Izinqumo kokuqala ukuphakamisa 'nakho obuqand’
Kuyinto lapha - Isiqephu yangempela ezine! Kusukela imizuzu embalwa yokuqala, noma ngisho ozimele ezimbalwa zokuqala, JJ Abrams ethakazelisayo, umbukwane eheha abantu besilisa elingenacala Star Wars: The Force ongenza izibonakalisa-movie emoyeni trilogy yasekuqaleni, okwaphela nge Ukubuya Jedi in 1983. (Lokhu umuntu eqala indaba 30 kweminyaka.)
ngokomthetho, kunjalo, ukuthi reconfigured njengoba Isiqephu eziyisithupha, kodwa The Force ongenza kukwenza bayakhohlwa komsebenzi kanye pedantry we prequel-trilogy elafika 15 eminyakeni eminingi kamuva. Isebenzisa the comedy ukuthi Phantom Menace belahla. The Force ongenza kuyinto uxhumene amandla action-adventure futhi kumnandi. ukubhuka kwami ​​kuphela amancane, okuyinto ngiyophuma endleleni manje, kuyinto nge droid entsha encane onesifo kancane Scrappy-Doo Vibe ngaye.
The Force ongenza kabusha waphaphama uthando lwami movie yokuqala futhi waphenduka fanboy yami kwangaphakathi ku fanboy zami zangaphandle. Zimbalwa kakhulu amabhayisikobho okuyinto angishiya facially sikhathele siyingcuba ngemva obusinekayo ngoba 135 amaminithi, kodwa lokhu ingenye. Futhi lapho Han Solo futhi chewie woza, Bengibona e ebhayisikobho Angizange kwadingeka kusukela ngineminyaka 16: engazi ukuthi beqhumuka bekhala izinyembezi noma ku ihlombe.
Buka i-trailer lokugcina
JJ Abrams futhi sobudala co-umbhali Lawrence Kasdan udale ifilimu okuyinto kokubili umkhuba oqhubekayo wokubuka lelandzisako kusukela ekuqaleni amafilimu amathathu ngokuhlakanipha obathandayo esilandelayo-gen ukuqala kabusha kwe- original 1977 Star Wars - kunalokho indlela yakhe okukhulu kabusha kucabanga we Kirk / Spock Star Trek. personae umndeni, izimo kanye izikhali izovela efana nesembozo noma ukudidiyelwa, futhi ekubambisaneni nge storylines entsha. Lesi saziso ngeke isikhala ephephile, ngenhlanhla, nge inhlamvu isixwayiso kuphela ngesakhiwo eziyisisekelo amaphuzu futhi impahla selusezandleni zomphakathi.
Ama-movie yokuqala zakhe zazihlale zisekelwe ekuxhumanisweni ukungasebenzi siqu nesomkhaya lebanti: nenjini yecala, namahloni futhi ukungqubuzana. ULuka eliqhutshwa i animus ngokuya eziyinkimbinkimbi kaFreud ngokumelene Darth Vader; Han Solo wabhekisela Millennium Falcon ngokuthi "yena"; izethameli owesilisa bakhuthazwa kokubili ukukhomba noLuka futhi Lech phezu Princess Leia e embi igolide inceku bikini wakhe - bese, nge enkulu lelandzisako sadism, satshelwa base mfowethu nangokuthi dadewethu. Konke lokhu nomunyu uphinde uzalwa The Force ongenza: contortions entsha ngenxa yokwesaba engenangqondo black-yamahlaya phakathi romance futhi injabulo.
Izinkanyezi ukukhuluma ekhaphethini elibomvu ngesikhathi ngoMsombuluko LA Premiere
Luka bekulokhu adumileyo engekho iphosta salokhu ifilimu, okwaholela kimi ngaphandle kokuba wesabe ekuqaleni ukuthi past 30 iminyaka, efana Atticus Finch e Harper kukaLee Hamba Setha A Mlindi, Esedabulile ukuba obubi. Engingakusho nje ukuthi uLuka, udlalwa ngumuntu manje grizzled Mark Hamill, kuwukuba khona Ayindida anamandla kodwa unwontedly.
Related: Hollywood imiklomelo uchwepheshe ubikezela Oscars Impumelelo The Force ongenza
manje Jikelele kanye namanje Princess Leia kuyinto indlovukazi zamaqhawe ukumelana – sibalo obuqinile kanye grandmotherly ngaphezulu. Amandla amnyama kuyinto abuyé ngesimo Order Okokuqala, behlose kabusha esungula ukulawula okuningi ngobuqotho undlovukayiphikiswa, nge athi eNuremberg imibuthano. Zazisuka ngokumelene nabo kukhona bomlilo abasha. Kukhona Rey, osindile namasu emhlabeni eqhelile Jakku, onomuzwa phetho ngaphakathi kwakhe: ukuthi adlalwa lisha Daisy Ridley ne ukuzimisela ziyaqothuka a young Keira Knightley. umlingisi waseBrithani uJohn Boyega udlala Finn, bangaphambili isiphepho trooper ofuna wokuhlengwa ngokusebenzisa ekhaphela aso okubi.
Lokhu kungenza ngibe nokusebenza kakhulu kusukela ku-Adamu Driver njengoba Kylo Ren, entsha Nkosi Dark nge imfihlo esabekayo. He is gorgeously unonya, yenu, namacebo enu futhi ezingezwakali - futhi ngokungafani Vader asendulo, asinikezwayo ukuba petulant ulaka lukababa, nge lightsaber ehoshiweyo, lapho abangaphansi inyufomu babe umsebenzi bengamukelekile simtshele kwamanye entsha, Ukunqoba zesikhashana Ukumelana. cishe unreadably droll Inkulumo yokushayela ebusweni olufanele kakhulu ngokwedelela Kylo Ren sika fastidious futhi bayabukana sengathi bafuna ukuhleka ngenxa yobuthakathaka izitha zakhe 'nesihawu. Kukhona isikhashana brilliant lapho esesebenzisa amandla telekinetic we Force ngokumelene shot laser.
Buka i-trailer yesibili
I lightsaber imiqhudelwano ngokwabo Yebo yabasubathi edlula 70s kanye 80s kodwa futhi ngandlela-thile ngaphezulu sekwenziwe ezithakazelisayo: Rey yena alidingi iseluleko uyazehlisa kusuka amadoda noma ku ukulwa bengahlomile noma flying neMinyaka Eyinkulungwane Falcon.
JJ Abrams ine uzwela okungokwemvelo for the classic Star Wars namathafa futhi izalela ngayo Elan: inkinobho kusukela emithaleni ukubhekisela emahlathini asezindaweni okuyisithunzi nenkambo enkulu izingwadule Rippling. Cishe ukubukeka yakhe yokuqala, Rey bubonakala Awe-Tobogganing phansi dune omkhulu isihlibhi okwenziwe ngentambo. Kimi kungcono isikhumbuzo sokuthi nakuba owokuqala Star Wars ukuthi avowedly liphefumulelwe Kurosawa sika The Hidden Fortress, Ngicabanga ukuthi ekuqaleni etholakala ukubukeka kwalo kusukela kaDavide Lean Lawrence-Arabiya noma ngisho dreamscapes ka Dali.
Related: Star Wars: The Force ongenza - interactive yakho ukukopela ishidi
Kodwa-ke lokhu ifilimu iyingxenye bezokuzijabulisa omkhulu ngakho-ke asikho isidingo sokuba ubheke kuphela uqobo. The Force ongenza kungaqali, endleleni ezinye franchise, uzizwa isidingo sokuba "amnyama" - kokuba yebo nokusetshenziswa obubi. Ngokuyisisekelo amandla kanye kwi Riptide omkhulu kuwukukhuphuka ka ukukhohliseka nethemba, ukuthi isimiso sokuziphatha umndeni-movie okuye usulu ngokubulala off isiko dystopian ka-sci-fi. Empeleni, manje Star Wars usephendukele ngale uhlobo-sci-fi zazo siqu intergalactic athi Arthurian romance: ukuthi, esebuya emhlabeni ngoMgqibelo ekuseni izithombe. The Force ongenza kuyinto engenangqondo melodramatic futhi enesihawu yebo, kodwa okuthakazelisayo futhi echichima amandla futhi uhlobo ayo yokuphana. Yeka isipho sikaKhisimusi.
• I-star wars: The Force ongenza ikhishwe e-UK nase-Australia ku 17 Disemba futhi e-US ku 18 December
← The 25 imidlalo best of 2015: 20-16 The 25 imidlalo best of 2015: 15-11 →